SAAD oo Sad Buuggaag ah ku Wareejisay Wasiirka Waxbarashada DDS – Rasaasa News
SAAD oo Sad Buuggaag ah ku Wareejisay Wasiirka Waxbarashada DDS
Feb 27, 2012 Ururta SAAD oo Buuggaag Deeq ah ku Wareejisay Wasiirka Waxbarashada DDS
Jijiga, Feb 27, 2012 [ras] – Buuggaag isugu jira maadooyinka aqoonta kala duwan ee heerka waxbarashada dugsiyada sare ayay Ururta SAAD ku wareejisay wasiirka waxbarashada degaanka Somalida Ethiopia mudane Cabdirashiid Cabdi Guuleed.
Munaasabada wareejinta buuggaagta waxaa goob joog ka ahaa wassiirka waxbarashada Cabdirashiid Cabdi Guuleed, gudoomiyaha Ururta Saad Axmed Nashaad, qaar ka mid ah maamulayaasha dugsiyada sare ee magaalada Jijiga iyo Arday badan.
Wasiirka waxbarashada Cabdirashiid Cabdi Guuleed ayaa munaasabada wareejinta buuggaagta uga mahad celiyey Samafalida SAAD ee deeqda buuggaagta ay ku wareejisay, isaga oo sheegay in ay ka faa,iidaysan doonaan ardaydu.
SAAD ayaa waxqabad dhinacyo badan leh oo muuqda ka gaysata baahida ka jirta degaanka Somalida Ethiopia. Deeqdan buuggaagtuna waa qayb ka mid ah waxqabadka SAAD ka gaysato degaanka Somalida Ethiopia.
Wasaarada waxbarashada ee dawlada dhexe, ayaa masuul ka ah dejinta manhajka waxbarashada ee ilaa heer dugsi sare, Manhajkaas oo ku qoran afafka kala duwan ee ay ku hadlaan qoomiyadaha Ethiopia.
Wasaarada waxbarashadu waxay u xil saartaa soo saarida iyo daabacaada buuggaagta manhajka ay dajisay maamulada degaanada Ethiopia si ay u daboolaan baahida buggaagta ee Ardayda.
Sida ay sheegtay Hayada SAAD waxaa ka jira dugsiyada sare ee magaalada Jijiga baahi buggaag yari ah, waana mid keentay in Hayadu u soo iibiso duggsiyada sare Jijiga buuggag ay wax ka bartaan.
Jaaliyadda DDSI ee Qatar oo Qabtay Kulan Lagu Dardar Galinayo Wax Qabadka Jaaliyadda Iyo Xulashada Guddiga Cusub ee Jaaliyadda